Soddon iyo sagaal ku dhimatay Nairobi - BBC Somali - Warar
Soddon iyo sagaal ku dhimatay Nairobi
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 21 September, 2013, 11:18 GMT 14:18 SGA
Ciidamada ammaanka ee Kenya, ayaa sheegay in ciidamada ay wali wadaan raadinta nimanka wajiga u xiran yahay oo hubaysan ee weerar ku qaaday xarunta tukaamada ee Westgate ee Nairobi.
Waxaa la maqlayaa xabado qarax habeenimadan gudaha daarta tukaamadaoo ah afar dabaq.
Masuuliyiinta ayaa sheegay in kooxaha weerarka soo qaaday in meel la isugu riixay daarta dhexdeeda.
Madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in soddon iyo sagaal qof ay ku dhinteen weerarka, oo ay ku jiraan dad ka tirsan reerkiisa. In kabadan boqol iyo konton qof ayaa ku dhaawacantay.
Wasiirka ammaanka ee Kenya ayaa sheegay in dad ay afduubeen kooxaha weerarka soo qaaday.
Alshabaab ayaa sheegaty inay ka danbaysay weerarka. Waxay sheegeen inay ka jawaabayeen ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya. Alshabaab ayaa sheegtay in kooxaha weerarka soo qaaday ay diideen inay isku dhiibaan ciidamada Kenya.
Ciidan Kenya ayaa sheegay inuu dhintay mid ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday oo dhaawac isbitaalka loogu qaaday.